नायिका अरूणिमा लम्सालले किन गरीन डिभोर्स ? « Tulsipur Khabar
नायिका अरूणिमा लम्सालले किन गरीन डिभोर्स ?
एक जमानाकी चर्चित नायिका अरूणिमा लम्सालले डिभोर्स गरेकी छन् । उनले पति अमित अर्यालसँगको १२ वर्ष लामो वैवाहिक सम्बन्धलाई एक साताअघि टुंग्याएको अरूणिमा निकट श्रोतले बताएको छ । हाल अरूणिमा आफ्नी छोरी र बाबुआमाका साथमा बस्न थालेकी छन्। उनि अमेरिकामा बस्दै आएकी छिन ।
श्रोतका अनुसार, अरुणिमा र पति अमितबीचको सम्बन्धमा बिहेको केही वर्षमै समस्या आएको थियो । उनीहरूबीच केही महिनायता सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रिया चलिरहेको थियो । उनीहरूबाट एक छोरी छन् ।
अमेरिका जानुअघि नै दुबैजनाले छुट्टिने मनसायसाथ गएको बताइन्छ । सोही योजना अनुसार उनीहरूले नेपालमै छँदा सम्पत्तिको भागबन्डा गरेका थिए । हाल बाल्टिमोरमा बस्दै आएकी अरूणिमाले पतिले आफूलाई अनावश्यक शंका गर्ने र स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने गरेकाले छुट्टिने निर्णय गरेको हुन् श्रोतको भनाइ छ ।
उता अरूणिमाका पतिले पनि आफूले स्वतन्त्रता दिए पनि अरूणिमाले त्यसको सम्मान नगरेको गुनासो राख्ने गरेका थिए । अमितसँग विवाहपछि पनि अरूणिमाले फिल्ममा अभिनय गर्दै आएकी थिइन् । तर, उनको करिअरले गति लिन सकेको थिएन । करिअर धरमराएपछि उनी अमेरिका गएकी थिइन्।